10 Imitsalane Engaqhelekanga Ehlabathini Lonke | Gcina A Isitimela
ekhaya > Ukuhamba eYurophu > 10 Imitsalane Engaqhelekanga Ehlabathini Lonke
10 Imitsalane Engaqhelekanga Ehlabathini Lonke
Qeqesha ukuhamba iBritane, Ukuhamba ngololiwe eTshayina, Qeqesha uhambo eJamani, Uloliwe Travel Holland, Uloliwe kuhambo Italy, Uloliwe ohamba eScotland, Uloliwe eSpain, Uhambo lukaloliwe lwaseNetherlands, Qeqesha uKhenketho e-UK, Ukuhamba eYurophu
(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 29/04/2022)
le 10 izinto ezinomtsalane ezingaqhelekanga kwihlabathi liphela ziya kukumangalisa. Icawa yeCinderella enemilo ephezulu yesithende, iinduli zentsomi, iibhulorho ezimisiweyo, kunye netonela ekhethekileyo eNgilani – zimbalwa ezingaqhelekanga nezingaqhelekanga, iindawo ezinomtsalane onokuthi uzindwendwele kwihlabathi jikelele.
1. Imitsalane Engaqhelekanga Ehlabathini Lonke: Ibhalkhoni kaJuliet
Bambalwa kakhulu abantu abangaziyo ukuba ibali likaRomeo noJuliette lenzeka eVerona. Ngaphezu, bambalwa kakhulu abantu abaqheleneyo ne-romantic balcony scene. Enye yezona zinto zinomtsalane ngokukhethekileyo ukutyelela eVerona yibalcony kaJuliet. Ibalcony yinxalenye yendlu, where a Cappello family lived in the 13th century. kunjalo, balcony edumileyo yongezwa kuphela kwindlu kwi 20ngekhulu th.
Ukwengeza, I-balcony iye yaba yenye yezona ndawo zidumileyo eYurophu. Ngelixa i-balcony yayingenayo indima yokwenyani kwimeko yebali likaRomeo noJuliet, itsala amakhulu eendwendwe minyaka le. Ndisemathandweni, phuke intliziyo, abaphuphi nabathanda uShakespeare, beza ukushiya amanqaku abo othando, iminqweno, kunye negraffiti eludongeni phantsi kwebalcony kaJuliet.
IRimini ukuya eVerona ngoLoliwe
IRoma ukuya eVerona ngoololiwe
UFlorence waya eVerona ngoLoliwe
IVenice eya eVerona ngoololiwe
2. Fairy Glen, Isiqithi saseSkye
Ubume bekhowuni, iinduli eziluhlaza eziluhlaza, ejikelezwe ngamachibi kunye neengxangxasi, I-Fairy Glen yenye yezona ndawo zingaqhelekanga zokutyelela kwi-Isle of Sky. Nangona kungekho mvelaphi eyaziwayo yegama elilodwa, Indawo yaseFairy Glen inomtsalane okhethekileyo.
Eyona ndawo ilungileyo yeembono ezintle zeFairy Glen ivela kwiCastle Owen. Le ndawo asiyonqaba yokwenyani, kodwa kunokwakheka ilitye elifana nenqaba ukusuka kude. UFairy Glen mncinci kakhulu; ke, kungcono ukuyidibanisa kunye nokutyelela iKilt Rock, Indoda endala yaseStorr, kunye namaDama aseNtsomi.
Imyuziyam yokuqala yobugcisa be-fluorescent ehlabathini, i Umtsalane wombane waseLadyland eAmsterdam yenye 10 imitsalane engaqhelekanga eYurophu. Nokuba awungomlandeli weemyuziyam, le myuziyam ye-fluorescent ngamava amahle kubantwana nakubantu abadala. Ukongeza kwingqokelela ephawulekayo yamaminerali e-fluorescent, ILadyland inika umzobo omangalisayo we-fluorescent ukusuka kwi-1950s. Ngaphezu, abakhenkethi bafumana ithuba elixabisekileyo lokuthatha inxaxheba ekudaleni owabo umsebenzi wobugcisa, ekukhanyeni okumibalabala.
Lo mtsalane umangalisayo usentliziyweni yesithili saseJordaan eAmsterdam, apho igumbi elingaphantsi elimnyama likhanyisa izibane ezimibalabala. Iqanjwe emva kwe-albhamu kaJimmy Hendrix Electric Ladyland, lo mtsalane opholileyo umalunga nobugcisa be-psychedelic kunye nomculo we-70. Ngaphandle kwamathandabuzo, iMyuziyam yoMbane yaseLadyland eAmsterdam yenye yezona zinto zinomtsalane kwihlabathi.
4. Itonela leBude, Cornwell eNgilani
Ijongeka njengetonela yeplastiki eqhelekileyo kwindawo yokupaka iimoto kwivenkile enkulu yaseCornwall, Itonela leBude liyamangalisa. Lo mtsalane ungaqhelekanga ungomnye ophezulu 10 Umtsalane eNgilani enkosi kumawakawaka ezibane ze-LED ezikhanyisa kwi-multicolor.
Ifakwe kwidolophu eyozelayo yaseBude, i 70 m itonela inomlingo xa ikhanyisiwe. Elona xesha lilungileyo lokuza kungokuhlwa, ngamava okukhanya kokugqibela. Ngelixa iBude Tunnel ibonakala icacile emini, ebusuku iba ngummangaliso wehlabathi, ukutsala iindwendwe ezivela kulo lonke elaseBritani. Okukwintsusa, iBude Tunnel ingaba a Ukumisa okumnandi kuhambo lwakho lokunqumla iYurophu, apho ummangaliso wokwenyani wetekhnoloji ukhanyisa amehlo kunye neentliziyo zabancinci nabadala.
5. Imitsalane Engaqhelekanga Ehlabathini Lonke: Spreepark eJamani
eBerlin Ipaki yokonwabisa wazi amaxesha angcono, ngakumbi kwincopho yayo 1969. I-Spreepark isetyenziselwa ukutsala 1.5 abatyeleli abazizigidi, ukukhwela kuyo 40 iikhabhini 45-imitha ivili Ferris. I-Speerpark yayiyeyona nto inomtsalane eMpuma Jamani de kwadityaniswa 1991.
Kwincopho yayo, iindwendwe zinokukhwela i-rollercoaster ephambeneyo, Grand Canyon ukukhwela amanzi, kunye neekomityi ezinkulu ezijikelezayo. Ngelixa ipaki ilahlekelwe ukuthandwa kwayo ngenxa yokuncipha, kunye nokulahlwa, I-Spreepark yahlala iyindawo emnandi yokutyelela eBerlin. Ngaphezu, ipaki yokuzonwabisa engasasetyenziswayo iye yaba yenye yezona zinto zinomtsalane zingaqhelekanga eYurophu, iyafikeleleka kwaye ivuleleke kubatyeleli abanomdla.
IFrankfurt iya eBerlin ngoololiwe
ILeipzig ukuya eBerlin ngoololiwe
IHanover eya eBerlin ngoLoliwe
6. Idolophu yaseThames yaseTshayina
Hayi kude ukusuka eShanghai, ukusuka kwizakhiwo eziphakamileyo kunye neetempile zamandulo, uya kufumana enye i-charm yezakhiwo kumfanekiso wedolophu yesiNgesi. Izitalato zeCobblestone, ibandla, isikwere sedolophu ephakathi, kunye nomqondiso wokukwamkela kwiDolophu yaseThames.
Idolophu yaseThames ibiyinxalenye yesicwangciso esikhulu sokudala iindawo ezihlala kumazwe ngamazwe, kodwa elo cebo alizange lizaliseke. ke, namhlanje abatyeleli eShanghai banokubuka ezinye ze ezona skyscrapers zinomtsalane kwihlabathi kwaye umise ukuzulazula kwindawo encinci yaseLondon eTshayina.
Inqunyanyisiwe 100 iimitha ecaleni kweendonga zomwonyo, I-Caminito del Rey yenye yezona ndawo zibalaseleyo zokutyelela eSpain. 2.9 km ibhulorho yeenyawo, 4.8 indlela yokufikelela ye-km, i 7.7 km ubude beCamino yayikade iyindlela yenkonzo eya edameni. kunjalo, namhlanje yenye yezona ndawo zinomtsalane kubakhenkethi eMalaga.
Esinye sezizathu zokuba iCaminito itsale abahambi abaninzi yindawo ekuyo. Beka ecaleni kweLos Gaitanes Gorge, i-canyon ephawulekayo ye-limestone kunye ne-dolomite. ngoko ke, nangona iibhulorho ezimxinwa nezijingayo, umtsalane engaqhelekanga Caminito del Rey yenye yeendawo kufuneka-ukubona Andalucia, ngakumbi kubathandi beadrenaline.
8. Inkonzo yeGiant Glass Slipper yaseTaiwan
Ivulwe ngaphakathi 2016, the high heel glass wedding church holds the Guinness record for the world’s largest high heel shoe-shaped structure. I-slipper yeglasi enkulu yindawo yomtshato eyaziwayo kodwa ayinamsebenzi wokwenyani wenkolo. kunjalo, abanye banokuthi i-giant glass high heel ifana nesihlangu sikaCinderella.
Icawa yesithende esiphakamileyo eTaiwan 17.76 iimitha ngobude kwaye yenziwe ngaphezulu kwe 300 iglasi eluhlaza okwesibhakabhaka, ishiya ifuthe eliphefumlayo kwabo bayibukeleyo. Lo mtsalane ungaqhelekanga useOcean View Park kwilokishi yaseBudai eTaiwan.
9. Imitsalane Engaqhelekanga Ehlabathini Lonke: Idabi laseOrange laseItali
I-carnival yase-Ivrea iyenzeka 3 iintsuku ngaphambi kweFat ngoLwesibili. Eli holide likhethekileyo lizisa abantu kwindawo ekhethekileyo “imfazwe” izitrato e-Ivrea, begibiselana iiorenji. Nangona kuvakala ngathi kukulwa ukutya okumnandi, Idabi le-orenji linokuba nobundlobongela, kwaye abaninzi abathathi-nxaxheba bashiya begruzukile kwaye benzakele.
Umtsalane wobundlobongela wenziwa ngenxa yesiganeko esinobundlobongela ngakumbi. Kuthiwa ngelinye ixesha inenekazi eliselula lanqunyulwa intloko yi-marquise embi. Nangona kungacaci ukuba kukho nayiphi na inyaniso kweli bali, nangona kunjalo amakhulu abantu aya kwicarnival eorenji minyaka le. Ngaloo ndlela, iyenza ibe yenye yezona zinto zinomtsalane zingaqhelekanga eItali.
EMilan ukuya eRoma ngoololiwe
UFlorence uya eRoma ngoololiwe
Pisa eRoma ngoLoliwe
ENaples ukuya eRoma ngoololiwe
10. Ngaphantsi kweNdlu yaseFengjing yaMandulo
Lo mtsalane ungaqhelekanga ngumbono owahlukileyo kwidolophu yakudala iFengjing. Idolophu endala edumileyo eTshayina yaziwa ngemijelo yayo, kwaye ukususela 2014 yaziwa ngokuba likhaya kwi-Upsidedown house. Xa kungena iindwendwe zendlu zinokufumana ifenitshala kunye nezinto zendlu, ifana nendlu ephezulu ePoland.
Ekungeneni endlini, uya kufumana yonke into ijonge phantsi, ngoko akukho nje ngaphandle. Nangona kungekho nto yokwenza kulo mtsalane, umntu akanakuthabatheka kwaye athabatheke ngolu yilo lwezakhiwo olungaqhelekanga.
Thina Gcina A Isitimela Ndingakuvuyela ukukunceda ucwangcise uhambo oluya kwezi 10 imitsalane engaqhelekanga kwihlabathi jikelele.
Ngaba uyafuna ukushumeka iposti yethu yebhlog ethi "Izinto ezinomtsalane ezili-10 ezingaqhelekanga kwihlabathi liphela" kwindawo yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fxh%2Funusual-attractions-worldwide%2F - (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
#iindawo ezinika umdla zotyelelo	engaqhelekanga	UnusualAttractions	unusualattractionsworldwide
5 Best Iziselo Local Ukuze Selani Kwaye Zama EYurophu
Uloliwe wokuhamba eBelgium, Qeqesha ukuhamba iBritane, Qeqesha uhambo eFrance, Qeqesha uhambo eJamani, Uloliwe kuhambo Italy, Ukuhamba eYurophu
Business ahambe ngetreyini, Iingcebiso zokuhamba ze-Eco, Uhambo loLoliwe, Iingcebiso zokuhamba, Ukuhamba eYurophu
5 Uhambo Usuku Ukusuka Milan By Train
Uloliwe kuhambo Italy, Ukuhamba eYurophu